Momba anay | Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.
Hangzhou Dro Textile Co., Ltd.dia orinasam-pananganana lamba mitarika miaraka amin'ny famokarana sy ny varotra. Manana ekipa orinasa efa za-draharaha sy mahay izahay. Manana 5 mahery isika,5Karazana lamina 00 azon'ny mpanjifa misafidy( lamina nolokoana & vita pirinty) avy ary ny habetsaky ny lamina mitombo amin'ny taha 15% isan-taona. Miaraka amin'ny kalitao miavaka sy ny fahombiazana avo lenta, ny fahaiza-manao matanjaka ihany koa hanamboarana arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Manana traikefa an-karena amin'ny varotra lamba ny fanondranana ary manana laza tsara eo amin'ny sehatra.
Manamboatra vokatra isan-karazany mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa samy hafa izahay. Ny vokatray dia voamariky ny fiasa toy ny tsy fahampian-drano, ny fisorohana ny afo, ary ny fivoahan'ny etona rano, ny rivotra ary ny anti-static, anti-static, ary anti-ultraviolet. Miaraka amina karazana fampiharana marobe, ny vokatray dia azo anaovana kofehy, rakotra sambo, elo amin'ny masoandro, fanaka zaridaina, lay sy kitapo.
Haingam-pandehan'ny loko ny toetr'andro. Ny lamba sasany raha sendra tara-pahazavana mandritra ny fotoana maharitra dia ho faty na ho very ny hamafin'ny lokony.
Karazan-doko sy endrika maro
DRO dia manome safidy. Mety samy manana ny tsirony sy ny safidiny amin'ny loko samy hafa ny tsirairay. Noho izany, maro ny endrika sy loko isan-karazany natomboka amin'ny tsena mifanaraka amin'izay ilainao.
Manohitra ny fahasimbana uv sy ny fahalovana.DRO dia mampihatra mpiasan-drindrina ultraviolet tena tsara izay miaro ny vatan'ny polymer an'ny lamba amin'ny vokatry ny taratra uv.Lavorary ho an'ny fampiharana ivelany rehetra. Noho izany amin'ny maha lamba ivelany azy, ny DRO dia voaporofo fa manana fahaizana matanjaka mahatanty ny vokatry ny fiaretana maharitra amin'ny tara-masoandro, rivotra, orana ary hamandoana. Maharitra izy io.